192.168.8.1 - पूर्वनिर्धारित IP ठेगाना के हो?
An इन्टर्नेट प्रोटोकोल ठेगाना पीसी नेटवर्कमा लि all्क भएको सबै उपकरणहरूलाई ट्र्यामि for्कनको लागि इन्टरनेट प्रोटोकल प्रयोग गर्ने संख्यात्मक ट्याग हो। एक आईपी ठेगाना २ प्रमुख उद्देश्यहरू प्रदान गर्दछ: नेटवर्क ईन्टरफेस वा होस्ट पहिचान र स्थान ठेगाना।
आईपी ​​ठेगाना नेटवर्कले पीसीमा आवंटित गर्‍यो वा आईपी ठेगाना उत्पाद विक्रेताद्वारा नेटवर्क ग्याजेटमा आवंटित गरियो। नेटवर्किंग उपकरणहरू एक विशिष्ट पूर्वनिर्धारित IP ठेगानामा सेट गरिएको छ; उदाहरण को लागी, सामान्यत: Linkys राउटरहरु को लागी IP ठेगाना को लागी आबंटित छ 192.168। 1.1
यदि तपाईं वास्तविक विश्वमा कुनै स्थानमा जान चाहानुहुन्छ भने तपाईले यसको ठेगाना अनुरोध गर्नुहुन्छ र जीपीएसमा राख्नुहुन्छ। जब तपाईं इन्टरनेटमा कुनै ठाउँमा जान चाहानुहुन्छ, तपाईं यसको ठेगाना सोध्नुहुन्छ, र तपाईं यसलाई आफ्नो मनपर्ने वेब ब्राउजरको यूआरएल बारमा लेख्नुहुन्छ।
WIFI को पूर्वनिर्धारित IP ठेगाना फेला पार्न विधि तल प्रदान गरिएको छ:
प्रत्येक राउटर निर्माताको एक पूर्वनिर्धारित लगइन राउटर IP ठेगाना राउटर हार्डवेयरको आधारमा देख्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ त्यहाँ लेबल गरिएको छैन भने, त्यसैले तपाईं यसलाई कागजात वा म्यानुअलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन राउटरको साथ आउँदछ तपाईंले खरीद गर्नुभयो पछि।
यदि ISP ले तपाईंलाई राउटरको साथ तयार गर्दछ त्यसैले यसले तपाईंलाई स्वतः IP ठेगाना र आईडीहरू राउटरमा लग इन गर्न र इन्टरनेट प्रविष्ट गर्न बताउँछ।
पूर्वनिर्धारित राउटर प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड खोज्ने तरिका?
पूर्वनिर्धारित लगइन आईडीहरू राउटर ह्यान्डबुकबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ जुन तपाईं पहिलो खरीद गरेर जडान गरेपछि राउटरसँग आउँदछ।
सामान्यतया, राउटरहरूको अधिकतमको लागि, पूर्वनिर्धारित आईडी दुबै "प्रशासक" अधिक "प्रशासन" हो। तर, यी पहिचान परिवर्तन हुन सक्छ राउटर निर्मातामा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाईंले ह्यान्डबुक हराउनुभएको छ भने, तब उसले राउटर हार्डवेयर आफैबाट पूर्वनिर्धारित आईडीहरू फेला पार्न सक्दछ किनकि ती प्रत्येक राउटरको पछाडि प्रिन्ट हुनेछन्।
राउटर प्रयोग गर्दा, हामी आईडी परिवर्तन गर्न सक्दछ कुनै पनि समयमा नेटवर्कमा अवैध प्रवेशबाट बच्न। यो राउटर रिसेट गर्न र छनौटको अनुसार एक नयाँ पासकी प्रविष्ट गर्न सकिन्छ।
राउटर रिसेट गर्न केहि सेकेन्डका लागि रिसेट कुञ्जी होल्ड गर्दछ र राउटर यसको पूर्वनिर्धारित फ्याक्ट्री पूर्वनिर्धारितमा पुनःबुट हुनेछ। अब, तपाईं पूर्वनिर्धारित सेटि settingsहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको छनौटको लग ईन ID सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
नेटवर्क उपकरणहरू एकल पूर्वनिर्धारित IP ठेगानामा स्थिर गरिएको छ; उदाहरण को लागी, Linkysys राउटरहरू सामान्यतया को IP ठेगाना आबंटित हुन्छन् 192.168.1.1। डिफल्ट आईपी ठेगाना अधिक ग्राहकहरु द्वारा अज्ञात राखिएको छ अझै पनी अधिक जटिल नेटवर्क वास्तुकलाको लागि अनुकूल गर्न सकिन्छ। पूर्वनिर्धारित गेटवे र IP ठेगाना भ्रमण गर्नुहोस्।
शब्द पूर्वनिर्धारित राउटर आईपी ठेगानाले निर्दिष्ट राउटर आईपी ठेगानालाई संकेत गर्दछ जसमा तपाईं लि linked्क हुनुहुन्छ र लगइन गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुनै पनि उद्यम वा गृह नेटवर्क को लागी आवश्यक छ।
यो पूर्वनिर्धारित IP ठेगाना राउटर यसको नियन्त्रण प्यानल र नेटवर्क सेटिंग्स पहुँच गर्न राउटर वेब ईन्टरफेस विस्तार गर्न महत्वपूर्ण छ। तपाईले राउटरको नेटवर्क सेटिंग्समा प्रविष्टि पाउन सक्नुहुनेछ यस ठेगाना ठेगानाको वेब ब्राउजरमा लेख्न पछि।